Fa maninona i Epublibre no tsy mandeha? Zahao ireo safidy hafa | Vaovao momba ny gadget
Raha mpamaky boky ianao, dia maro ny fahafaha-mampiasa mpampiasa ny tranokala Epublibre, satria tsy isalasalana fa momba ny ny pejy tsara indrindra amin'ny boky maimaim-poana amin'ny Internet. Matetika ary matetika no matetika hita ity pejy ity na tsy misy serivisy, noho io antony io ary satria tianay koa ny mamaky dia hiady hevitra momba an'io lohahevitra io izahay sy ny tolo-kevitr'ireo safidy hafa miasa ankehitriny fa tapaka ny Epublibre.
Tamin'ny fotoana rehetra nilatsahan'ny tranonkala dia niverina niasa izy tao anatin'ny andro vitsivitsy, saingy ny olana dia manelingelina ny famakianay na manimba ny tolakandro izay noheverinay fa handany azy io hamaky ny bokinay am-perinasa. Izao dia toa misedra olana lehibe isika, hodinihintsika izao ireo safidy mahasarika indrindra hisolo azy, ny sasany amin'izy ireo dia tena tsara ka angamba ho an'ny sasany dia safidy tsara kokoa na dia miasa tsara aza ny Epublibre.
1 Saingy ... Inona izany sa Epublibre?
1.1 Ahoana ny fomba hidirana amin'ny katalaogin'i Epublibre?
2 Efa ela i Epublibre no nidina. Mbola hiasa indray ve?
3 Mahazo miditra ao amin'i Epublibre ve aho na dia maty aza? Misy fomba iray nefa misy fetrany.
4 Alternatives to Epublibre
4.3 Andao hamaky
5 Tolo-kevitry ny editor
Saingy ... Inona izany sa Epublibre?
Ho an'ny mpamaky sasany indraindray na ho an'ireo mpamaky hentitra namaky an-taratasy ny fiainany manontolo aza dia hanazava ny atao hoe Epublibre izahay. Ity pejy ity dia nidina an-tserasera nanomboka ny taona 2013 ary nahavita nanangona trano famakiam-boky maro be. Raha mandinika angon-drakitra manokana avy amin'ny fanavaozana farany alohan'ny fianjerany farany isika dia afaka mahita fa trano famakiam-boky tsy latsaky ny 41.756 boky no notaterina ary efa ho 120 ny boky ho fanomanana. Ny tranomboky dia niompana indrindra tamin'ny anaram-boninahitra tamin'ny Espaniôla, saingy afaka nahita boky marobe tamin'ny fiteny ofisialy hafa amin'ny saikinosy toa an'i Valencien, Galisiana, Euskera na Catalan koa izahay.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny katalaogin'i Epublibre?
Raha te hisoratra anarana amin'ity tranonkala ity dia ilaina ny fanekena ny kaontintsika, saingy tsy fisoratana anarana mahazatra izany, mila miditra lisitra fiandrasana lava isika ahafahantsika mandany fotoana lava vao ekena.
Anisan'ny mahomby indrindra amin'ny tranonkala ny fananana boky momba ny famolavolana boky, azo idirana tanteraka avy amin'ny fonony. Mba hamoahana sy fanitsiana boky dia tsy maintsy mpikambana ao amin'ny tranonkala izahay. Fa ny misintona boky dia misy fahalalahana tanteraka, mba hahafahan'ny tsirairay miditra sy misintona boky araka izay itiavany azy.
Ny boky Epublibre rehetra dia misy amin'ny endrika ePub, na dia hitantsika amin'ny endrika hafa aza ny sasany aminy. Ny endrika ePub no endrika ampiasain'ny mpamaky boky na ny EreadersNa dia azo atao aza ny mijery an'io karazana endrika io amin'ny finday avo lenta na solosaina sasany, tsy azo atao mihitsy izany noho ny fahazavana manga amin'ireo takelaka misy azy ireo, mandreraka ny maso izy ireo. Ho an'ny fisintomana dia mila mahazo antoka izahay fa nametraka programa ho an'ny fisintomana torrent.
Efa ela i Epublibre no nidina. Mbola hiasa indray ve?
Ny tena izy dia tsy azo idirana i Epublibre anio raha miditra avy amin'ny tranokalanay izahay amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny adiresy tranonkala, tsy vao sambany nisy toe-javatra mitovy amin'izany ara-potoana, Epublibre dia nijaly amina fihenan-danja be tamin'ny fotoana maroSaingy efa ela be izy no nijaly tamin'ny fahalavoan'ny fotoana toy izany.
Afaka miverina ve ianao? azo antoka fa afaka miverina, na amin'ny fonenanao na amin'ny iray hafa. Na dia milaza aza ny zava-drehetra fa afaka manohy manemotra fotoana izy mba hahitantsika ny tenantsika alohan'ny tranokala miasa 100%. Ny olana dia manjaka ny fampahalalana diso, satria Epublibre dia tsy manana kaonty ofisialy amin'ny tambajotra sosialy, noho izany tsy afaka miditra amin'ny karazan-tserasera misy amin'ireo mpamorona azy izahay.
Hatramin'ny nahalavoany dia nisy kaonty Twitter sasany nipoitra saingy na dia toa ofisialy aza izy ireo dia tsia. Ny kaonty "ofisialy" hany ahazoanay loharanom-baovao rehetra dia ny an'ny tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ireo serivisy fampiantranoana Epublibre, tao amin'ny kaontiny no namoahany vaovao momba izany.
Ny kaonty manokana dia @TitivillusEPL izay raha ny vaovao farany dia nilaza izy fa kely sisa ny tavela ho an'ny Epublibre hiasa indrayIzao no lazaiko satria mihantona izao, noho izany tsy azonay jerena ny piraofilinao Twitter na ireo boky navoakanao. Tsy fantatray ny antony, saingy nosakanan'ny mpanelanelana Twitter ny kaonty.
Mahazo miditra ao amin'i Epublibre ve aho na dia maty aza? Misy fomba iray nefa misy fetrany.
Fomba hidirana amin'i Epublibre amin'ny toetrany ankehitriny. Nisy serivisy nantsoina archive.org izay tompon'andraikitra amin'ny fitehirizana pejy web mba tsy hahavery ny atiny amin'ny toe-javatra toy izao. Azonao atao ny mitsidika tranokala tsy misy ary tahaka an'ity tranga ity dia mety tsy ho hitan'izy ireo intsony.
Amin'ny alàlan'ny adiresinao ao amin'ny archive.org dia afaka miditra amin'ny Internet ara-dalàna izahay. Saingy miaraka amin'ny fetra lehibe, Tsy afaka miditra na miditra anaty atiny maro izahay izay tsy voarakitra an-tsoratra ao amin'ny archive.org. Anisan'ireny ny fampakaram-pejy vao haingana indrindra, satria ny archive.org dia manao backup indraindray. Tsy lafatra fa farafaharatsiny mba hahazoantsika fidirana.
Alternatives to Epublibre
Hodinihinay ireo fomba hafa azo soloina Epublibre tsara indrindra amin'ny famakiana boky amin'ny endrika isan-karazany, ny ankamaroany dia maimaimpoana tanteraka, saingy ny sasany mety manana karazana fisoratana anarana voalohany.
Ny fivarotana reny amin'ny fivarotana rehetra, efa fivarotana an-tserasera malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra, ary koa iray amin'ireo serivisy fividianana tsara indrindra (ho ahy ny tsara indrindra), izy io koa dia manana ny tombony azo amin'ny fananana famakiam-boky lehibe raha mpikambana voalohany ianao. Classics ny literatiora amin'ny fitenintsika, toa ny sanganasan'i Cervantes, Lorca na Miguel Hernandez ... sns. Tsy manadino ireo sangan'asa vahiny nadika tamin'ny teny Espaniôla, miaraka amin'ny fahafaha-misintona azy ireo amin'ny fiteniny voalohany.
Amazon ankoatry ny fanomezana boky rehetra ao anatin'ny fisoratana anarana voalohany anao, dia manolotra boky maro na dia tsy mpikambana aza ianao, fa amin'ny vidin'ny 36 € isan-taona Heveriko fa safidy tena tsara izany, satria ankoatr'ity serivisy boky ity dia manana olon-kafa maro koa izahay, ao anatin'izany ireo ao amin'ny magazay na horonantsary voalohany. Hisy fihenam-bidy mahomby hividianana a Kindle Paperwhite izay efa nataonay fanadihadiana tao amin'ny ActualidadGadget.
Efa niresaka momba an'ity tranonkala ity teo aloha tao amin'ny lahatsoratra isika, satria amin'ny alalàn'io no ahafahantsika miditra ao amin'ny Epublibre na dia tsy mandeha aza. Ary amin'ity tranokala ity dia afaka mahita mihoatra ny Boky 18.000 amin'ny teny espaniola. Raha ampiantsika amin'ny fiteny maro ny boky efa misy, manampy boky 1,4 tapitrisa izahay. Afaka misintona votoaty be dia be mora foana isika, na amin'ny PDF como el ePUB, ireo lohateny rehetra izay mahaliana anay indrindra.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo loharano lehibe amin'ny kolontsaina an-tsoratra izay hitantsika amin'ny Internet, iray amin'ireo soso-kevitra be indrindra ankehitriny fa tsy miasa i Epublibre.
Tsindrio ity rohy Mampiditra.
Amin'ity tranga ity dia hanoro hevitra izahay a serivisy mandray karama isam-bolana, na dia manana ny mety hanandrana azy io mandritra ny 30 andro. Manome antsika boky voasoratra maherin'ny 1000 ny famandrihana, ary koa audiobook marobe, zavatra iray tena ilaina ho an'ireo izay salama maso na te hihaino fotsiny rehefa miala sasatra na miala sasatra eo ambony sezalava.
Ny lohateny dia voaangona eo amin'ireo mpivarotra, kilasika ary zava-baovao. Manana fangatahana izahay iOS sy Android, noho izany dia ho tena ahazoana aina raha te hiditra amin'ny fitaovana miaraka amin'ireo rafitra fiasa ireo isika. Iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny karama, satria amin'ny lafiny iray, Netflix misy boky.
Mamaky, mianatra ary mivoatra no andian-teny nahasarika azy ireo. Mizara telo izy io, «Boky atoro», «Boky sy lahatsoratra amin'ny PDF» y «Loharano hanatsarana ny famakinao», lohahevitra mahaliana amin'ny fisafidianana boky. Manolora boky sy fitaovana manana fahazoan-dàlana maimaim-poana Creative Commons (fikambanana tsy mitady tombombarotra natokana hampiroboroboana ny fidirana sy fifanakalozana kolontsaina).
Orinasa lehibe iray hafa izay mandray anjara amin'ny kolontsaina an-tsoratra ihany koa dia Google. Ankoatry ny fanolorana serivisy tsy tambo isaina na ny milina fikarohana amin'ny Internet, manana tranomboky boky elektronika be dia be izy. Hahita iray isika boky marobe amin'ny endrika nomerika amin'ny fiteny rehetra, ao anatin'izany ny Espaniôla.
Ho fanampin'ny boky dia manana alàlana amin'ny magazine sy gazety izahay ka samy hafa be ny tolotr'izy ireo. Safidy tena manan-kery io raha te hamaky zavatra indraindray isika, saingy tsy tokony horesahiko ho loharano lehibe io raha tianao ny mamaky boky. Satria ny ankamaroany dia azo vakiana fotsiny fa tsy alaina.
Tolo-kevitry ny editor
Raha ny fahitako azy dia raha mamaky boky ianao, Tsy misy isalasalana, ny safidy tsara indrindra dia ny fahazoana boky elektronika Kindle avy any Amazon, satria ireo dia manana panneaux miaraka amina teknolojia tsy dia masiaka loatra raha ny fahitana azy. ary vidiny mirary ao anatiny, ankoatr'izay Manoro hevitra ny hisoratra anarana amin'ny Amazon prime aho, izay hanome antsika fidirana amin'ny iray amin'ireo trano famakiam-boky lehibe indrindra, miaraka amin'ny tombony fanampiny tena mahaliana hafa, toy ny fandefasana maimaimpoana ao amin'ny magazinao na serivisy horonantsary Premium misy andian-tsarimihetsika azonao.
Raha mieritreritra ianao fa misy safidy tsara kokoa Faly izahay mamaky ny hevitrao ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Fa maninona i Epublibre no tsy mandeha? Zahao ireo safidy hafa ireo
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara Marianito!
Misaotra an'i Marianito nandefa ny rohy, pejy iray tena mahaliana. fiarahabana